DOWNLOAD Shuttle Launch 06 (1) FS2004 - Rikoooo
dị iche iche mma
downloads 10 723
Mma nke launching nke ụgbọ mbara igwe na Cape Canaveral. -Agụnye 3 Ai, ha ga-adị ugbu a na ebe ndị mara mma. Ụgbọ mmiri na-gụnyere na nke a mkpọ anya na igba egbe na mpe mpe akwa. Biko mara na mgbagharị na-ewe anya ka anya dị ka ndị FS2004 mma mmalite. Ya anya ọzọ mgbe 2 nkeji. Mgbe na ị ga na-eche 12 nkeji ịhụ ya ọzọ site n'ikuku. Ị ga-ahụ ma na-eche 12 nkeji ma ọ bụ nso FS9 na-ahọrọ ọhụrụ Cape Canaveral.
Amụma: Ị ga-, ozugbo awụnyere na, na-ekwupụta ebe ndị mara mma na FS2004. The installer-eme ya na-akpaghị aka.
Gaa na ntọala ọba akwụkwọ dị iche iche> mepee folda "Addon Mpaghara "> Chọọ maka" Mwepụta mkpọchi 06 "pịa" Ọ dị mma "Malitegharịa ekwentị FS2004> mma arụnyere
Onye edemede: Ron Jeffers
LFML egosi Marseille FS2004